ကျမ တခါက ဒီမှာ ရေးဖူးပါတယ်...
Search Engineတွေ ရှာတာ တခြား၊ ပို့ပေးတာ တနေရာဆိုတဲ့ အကြောင်းကို....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်လာပြီးရော...၊ အနဲဆုံးတော့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေး ရှိတဲ့အကြောင်း လူသိသွားလည်း မနည်းဘူး မဟုတ်လား...:)
ဒါပေမဲ့ ခုလောက် ရင်မနာခဲ့ရဘူး....
Moscow, Moscow City arrived from bing.com on "ချစ်ကြည်အေး: March 2011" by searching for အဆိုးဆုံး ကဗျာများ.
04:35:21 --3hours 57 mins ago
Boyx Wed Apr 06, 09:20:00 AM GMT+8
Lolz. The worst poems. Hehehe
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 09:22:00 AM GMT+8
အေးပါ အေးပါ ကဘွိုက်ရယ် ရယ်စမ်းပါ ရယ်စမ်းပါတော်....
Anonymous Wed Apr 06, 09:38:00 AM GMT+8
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 09:40:00 AM GMT+8
ဟုတ်ပါ့ အလင်းရောင်လေးရယ် အမ သနားစရာလေးနော်....:p
Mon Petit Avatar Wed Apr 06, 09:55:00 AM GMT+8
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မမ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်လိုပဲသဘောဆက်ထားလိုက်နော်။
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 09:58:00 AM GMT+8
ဒါပေါ့ ညီမလေးရယ် ကိုယ့်ဘက်က သဘောထား ကြီးရမှာပေါ့...ဟဲဟဲ :)
ပွင့်မြုးဇင် Wed Apr 06, 10:05:00 AM GMT+8
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မမရယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခြံထဲရောက်ကိုယ့်ကြက်မလို့သာ ဆက်သဘောထားလိုက်ပါ.. :)
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 10:08:00 AM GMT+8
ဟုတ်ပါ့ ညီမဇင်ရယ် အဲသလို ကြက်မကလည်း လာ လာနိူင်လွန်း....ခွိ:)
ဗညားရှိန် Wed Apr 06, 10:08:00 AM GMT+8
ဟားဟား မချစ်ရယ် ဖြစ်ရလေး))) အဖြစ်က မနှစ်ကနဲ့ မတူးပါလားနော် ဟားဟားး)))))
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 10:13:00 AM GMT+8
ဘာညာစိန်...အံမယ် သူများဖြစ်တာကို အကျယ်ကြီး ရယ်သွားတယ်....ဟီး ဟီး ဟီး.....(ရယ်တာ မဟုတ်...နိူနေတာ)
သက်ဝေ Wed Apr 06, 10:59:00 AM GMT+8
မမချစ်ကြည်က ဘာလို့ အဲဒါတွေ လိုက်ကြည့်နေတာလဲ...
သာမီးဆို အဲဒါတွေ ဘာမှ မသိ၊ ဘာမှ မကြည့်...
ဘယ်လိုရှာလည်း ဆိုတာ မသိ...
ဘယ်ကရောက်လာလည်း ဆိုတာ မသိ...
ဘယ်သူလာလည်း ဆိုတာ မသိ...
ဆုမြတ်မိုး Wed Apr 06, 11:05:00 AM GMT+8
း) ဟီးဟီး ရယ်ရတယ် တီချစ်ကြည်ရဲ့ ... အဲဒါထက်ရယ်ချင်တာ ၀က်ခြေထောက်ကိုပဲရယ်ချင်တယ်..သမီးလည်းလုပ်ကြည့်ဦးမှပဲ
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 11:24:00 AM GMT+8
သာမီးတက်ဂ်ဝေက FeedJid liveမှမသုံးပဲဟာ ဘယ်သိပါ့မလဲကွယ်၊ ဘာမှ အထူးတလည် ရှာဖွေနေစရာမလို Real-time view ကို ကလစ်လိုက်ယုံနဲ့ current visitors တွေတွေ့နေရတာလေ သာမီးရဲ့
ကိုယ့်ဆီဝင်ဖတ်နေသူတွေ ကြည့်ပြီး ပီတိပွားရသပေါ့ကွယ်:)
သမီး စုမြတ် ဝက်ခြေထောက်ကမှ တော်ပါသေးတယ်ကွယ်....:))
Anonymous Wed Apr 06, 11:31:00 AM GMT+8
ဟားဟား လို့ ရီမသွားဘူးနော် အစ်မချစ်.... :D :D
Anonymous Wed Apr 06, 11:35:00 AM GMT+8
သာမီးမှာလဲ အဲဒါ ရှိသားပဲ။ ဒါပေမဲ့ သာမီးက အဲဒါတွေ မှလိုက်မကြည့်တာကိုလို့ ။ သာမီးပါ သာမီး စိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲနေတယ်။
နောက်လဲ အန်တီချစ် အဲဒါတွေ လိုက်မကြည့်နဲ့နော် ...း)
kiki Wed Apr 06, 11:45:00 AM GMT+8
ဒါဆို နောက်တခါကျရင်“ အဆိုးဆုံး အချစ်” ဆိုပြီး ရှာဝင်ကြည့်အုံးမှပဲ ..ဟဲ ဟဲ.. နောက်ဖေးပေါက်ကနေ ဝင်ချောင်းရတာ လည်း အရသာ တမျိုး လေ..အချစ် ရယ် ဟိဟိ..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Wed Apr 06, 11:58:00 AM GMT+8
စောစောစီးစီး ဘာတွေများလဲလို့ဝင်ကြည့်တာ ဖတ်ပြီးအော်ရယ်ပစ်တယ်.. ခွိခွိ
ငါ့အစ်မက ဘယ်တုန်းကများ အဆိုးဆုံးကဗျာတွေရေးလို့လဲဟွန့်
အစ်မ မခံနဲ့.. ဒီ search engine ကို တရားစွဲ..
Vista Wed Apr 06, 01:16:00 PM GMT+8
ရင်ပတ်နောက်ကကျော .. ရယ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 01:47:00 PM GMT+8
သာမီးဆွိရယ် မာမီချစ်ကြည်က အဲသာမျိုးလေးတွေ ကြည့်မှ စိတ်ချမ်းသာတာအေ့...ဟယ်...လူတွေ လူတွေ... လာဖတ်ကြသားတော့်...ဆိုပြီး...အဟိ :)
ကိ...သိတယ်လေ ကိတို့က နောက်ဖေးပေါက်ကနေ ဝင်ချောင်းနေကျ ဆိုတာ...:)
ချော...အဲသလို အားပေးဖော်တွေ ရှိတာ ဘလော့ဂါ အားတက်သကွယ်... ချမယ်ကွာ စူးပလိုက်မယ်...:)
ဗစ်စစစ....ဖြည်းဖြည်းရယ် ငါ့ညီမလေး ...လန့်ခ်ျစားချိန်ကြီးနော်....ထမင်းသီးမယ်...^_^
rose of sharon Wed Apr 06, 02:12:00 PM GMT+8
နောက်တာနေမှာပါကွယ်...ဟီးဟီး... ကိုယ်သာဆိုပိုဆိုးမှာ... ဒါကြောင့်ဒါမျိုးတွေလျှောက်မကြည့်ဘူးကွယ်...
အဖြူရောင်နတ်သမီး Wed Apr 06, 03:00:00 PM GMT+8
အကောင်းဆုံးကဗျာကဝိကျောက် Wed Apr 06, 03:15:00 PM GMT+8
Las Vegas လေဆိပ်ထဲ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ဖွင့်လိုက်တာ ရီရလို့ မျက်စေ့တောင် ကျယ်သွားတယ်
ညယံ Wed Apr 06, 03:20:00 PM GMT+8
ဒီနေရာလေးကို အမြဲရောက်ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါမှတော့ မမန့်ဘူးဖူး။ အခုရီရလွန်းလို့ ။ထမင်းစားပြီး အိပ်ငိုက်နေတာ ။ မျက်လုံးကို ကျယ်သွားရောပဲ :D
ခနွဲ Wed Apr 06, 03:22:00 PM GMT+8
ဖြစ်တက်ပါတယ်လေ။ search engine ကို ပဲ အပြစ်တင်ရမှာပေါ့။
sonata-cantata Wed Apr 06, 05:13:00 PM GMT+8
ဘယ်သူ့ လှည့် ရမ်းရပါ့
ဒါမျိုးက တရားနဲ့ ဖြေလို့ ရမှာမဟုတ်
ကဗျာတွေ ထပ်ရေးပြီး ဖြေလိုက်ပါ ချစ်ကြည်
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 05:29:00 PM GMT+8
ရိုစ့် အဲသာတွေ ကြည့်ရတာ ပျော်စရာ ရိုစ့်ရဲ့ အေးဆေးပါ ကိုယ် အပျော်တင်လိုက်တာ...ဟဟဟ :)
ဟုတ်တယ် ညီမ နတ်သမီး တော်တော်များများ ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ...:)
ကိုကြီးကျောက်နော်......၊ သူကဖြင့် လျှောက်လည်နေပြီးတော့....ဒါ့ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့ ဒါပဲ....:)
ညယံ...အဲလို သူများကို မျက်လုံးကျယ်သွားအောင် လုပ်ရတာ ကြိုက်တယ် (ဟယ်...အရင်ပိုစ့်နဲ့ မှားသွားပြီ...ခွိခွိ...:)
ခနွဲ...ဒါပေါ့ ဒါပေါ့...ဆာ့ခ်ျအင်ဂျင် အပြစ်ပေါ့ အသိသာကြီး ဟွမ်းးးး)
သီတာ...ဟေ့အေး မရမ်းရဲပေါင်တော်....တရာနဲ့ ဖြေပါတယ် အကြွေမရှိလို့....:PP
Evy Wed Apr 06, 05:34:00 PM GMT+8
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ အစ်မရယ် ။ ဖတ်ပြီးရယ်လိုက်ရတာ
ကလူသစ် Wed Apr 06, 05:45:00 PM GMT+8
search engine ကတော့ မမှားလောက်ပါဘူးလေ
Ree Noe Mann Wed Apr 06, 07:09:00 PM GMT+8
သဘောကျလွန်းလို့ အမရေ တော်တော် ကြာကြာလေ ရယ် (ရီ) လိုက်မိတယ်။ ဟားဟားဟား
ညီလင်းသစ် Wed Apr 06, 07:10:00 PM GMT+8
အခုတော့ သိသွားပြီ၊ ကဗျာအကြောင်း ကျမ်းပြုရင် Bibliography ကို ဘယ်မှာ ညွှန်းရမယ်ဆိုတာ....။းD
မယ်ကိုး Wed Apr 06, 07:20:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်အေး Wed Apr 06, 07:53:00 PM GMT+8
ရယ်ပဲ ရယ်နေရတာပေါ့ ညီမ Evyရယ် ဟဟဟ....:)
ကလူသစ် အသွားအလာ ဆင်ခြင်ပါ ချောင်းရိုက်ခံရကိန်းရှိတယ် ဟွန့် :)
ဟုတ်ပါ့ မောင်ရီနိူရယ်....အနဲဆုံးတော့ ရယ်ရတာပေါ့.....:)
ကိုညီလင်းသစ်ရေ...ခုတော့ အဲသလိုပဲ ပြောရမလို ဖြစ်နေတာပေါ့ ဟား ဟား ဟား....:PP
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Thu Apr 07, 01:58:00 AM GMT+8
နေ၀ဿန် Thu Apr 07, 10:48:00 AM GMT+8
ပထမတော့ ကြောင်သွားတယ်.. နောက် သဘောပေါက်တော့ ရယ်လိုက်ရတာ... အဲဒီ search engine ကို မယုံနဲ့နော်..း))))
ညီမလေး Thu Apr 07, 12:49:00 PM GMT+8
ဖြစ်ရလေ ချစ်ချစ်ရယ် ကတောက်းD
မမင်း Thu Apr 07, 04:01:00 PM GMT+8
ခုဝင်တာ ကြက်ဖ (ဒါကြောင့်မချစ်ကြီး ပိုရင်နာသွားတာနေမှာ)
လပြည့်ရိပ် Thu Apr 07, 07:37:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်အေး Thu Apr 07, 11:25:00 PM GMT+8
ကိုအောင်...ဟာ ဒီပိုစ့် :D တွေ သိတ်ထွက်တယ်....:)
နေဝဿန်...ယုံဘူး လုံးဝယုံဘူး ဟဟဟ....:)
မမင်း... သူက အထီးအမတောင် ခွဲကြည့်နေလိုက်သေး ဟေးဟေး :)
လပြည့်ရိပ်...ဟော...ဒီ :D ထွက်ပြန်ပြီ....:)
crystal Fri Apr 08, 12:19:00 AM GMT+8
ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်တယ်၊ ရီတယ်(ရီစရာမှန်း သိသွားလို့)
နောက်တခါ အပေါ်တက်ပြန်ဖတ်တယ်၊ အရင်ပိုစ့်လည်း ဖတ်ဖူးတယ်။
ကိုယ့်ပိုစ့်မှာလည်း အဲလိုကြည့်တယ် ဘူဒူတွေလာလဲ ကြည့်တယ်။
ပြီးတော့ နာ့ပိုစ့်တွေဆိုရင် ဒီထက်ပိုဆိုးသေးတယ်လို့ ဟီးးးး ချသွားတယ်၊
အဲ ဒီမထွက်အောင် ဟီးသွားတယ်။ အစ်မ သိပါစလေ....။
မောင်မျိုး Fri Apr 08, 10:24:00 PM GMT+8
ဘာလဲဟင် ကျနော် သဘောမပေါက်လို့ ။
မောင်ဝေး Sat Apr 09, 09:48:00 PM GMT+8
မှန်းချက်က ထွက်လာတဲ့မြေပဲတစ်ဆံနဲ့ မကိုက်ဘူးကိုး.. ဖစ်ရလေတယ်ကွယ်။
ချစ်ကြည်အေး Sun Apr 10, 04:40:00 PM GMT+8
ဟီး သွားတဲ့ ညီမလေး ခရစ်စတယ် ကျေးဂျူးကဘာဆိုင်ရော်.....:)
ဟင် ဖြစ်ရလေ ကြောင်မျိုးရယ်....:)
ကမောင်ဝေး မှန်းကတည်းက မြေပဲတဆံစာ မရှိတာပါအေ... ညည်းကလည်းပဲ ဆိုတာ
သူများကို ပြော ပြောချင်လွန်းးးး :p
Anonymous Tue Apr 12, 02:09:00 AM GMT+8
:D ... ဟိုးနေ့ကတည်းကကော်မန့်ရေးချင်နေတာ အမကို
အားနာလို့ .... ဒီပိုစ့် ဖတ်ပြီးတော့ ကျနော် အသားကုန် ရီတာဗျ ။
ကျနော်နဲ့ ဘဝဆင်တူနေလို့ ။ ကျနော့် ဘလောဂ့်ရေးစတုန်းက traffic feed ကိုနေ့တိုင်းအရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဘယ်သူတွေလာတုန်း ၊ ကိုယ့်နယ်သားတွေလာလားလို့ပေါ့ ။ လာကြတယ် Search Engine ကနေတဆင့် ။ သူတို့တွေ Cbox မှာလာအော်ကြတယ် ။
ကျနော့်မှာ အဲ့ဒါတွေဖတ်ပြီး အားတွေကုန်သွားရော ။ စာရိုက်ရမှာ တအားပျင်းတဲ့ ကျနော် ဘယ်လောက်ကြိုးစားရေးပြီး မှတ်တမ်းထားခဲ့ရသလဲ သူတို့မသိဘူး ... :D .. နည်းနည်းပါးပါး လိမ်ညာပြီး အားပေးသွားကြတာမဟုတ်ဘူး .. :D
အဲ့ဒါတွေပြန်တွေးမိလို့ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရီမိလိုက်တယ် ..
ရီရတယ် တကယ် ..။